हिमाल खबरपत्रिका | ‘नेपाल’ बारे नयाँ बहस
‘नेपाल’ बारे नयाँ बहस
दक्षिणएशियाको सबैभन्दा पुरानो देश हो, नेपाल । तर, यो देशको नाम ‘नेपाल’ नै किन र कसरी रहन गयो ? जवाफ खोज्न विद्वानहरू इस्वी संवत्को चौथो शताब्दीदेखि प्रयोगमा आउन थालेको ‘नेपाल’ शब्द वरिपरि घोत्लिन पुग्छन् । भलै उनीहरूबीच नै मतैक्य पाइँदैन । अधिकांशले प्राप्त तथ्य वा आफ्नो अध्ययनको क्षितिजभित्र रहेर ‘यो नै अन्तिम सत्य हो’ भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । दिवाकर आचार्य लिखित नीपजन र नेपालः एउटा छोटो आद्य—इतिहास त्यसैको पछिल्लो सिलसिला हो ।
पुस्तकमा ‘नेपाल’ सम्बन्धी कल्पना र अड्कलको सप्रमाण आलोचना गरिएको लेखकको दाबी छ । भारोपेली भाषाविज्ञान र संस्कृत व्याकरणको नियमका आधारमा नेपाल शब्दलाई भारोपेली शब्द मान्नुपर्ने पुस्तकको निष्कर्ष छ । लेखकका अनुसार तेस्रो–चौथो शताब्दीअघि देश र जनता दुवैलाई नीप भनिन्थ्यो । त्यही देशवाची नीप शब्दबाट देशकै अर्थमा आ+ल प्रत्यय भएर नेपाल शब्द बनेको पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तकमा भनिएको छ, ‘–आल पदांश पूर्ववर्ती लेखकद्वय क्रिस्टियन लासेन र ज्ञानमणि नेपालले माने झैं कुनै शब्द होइन, प्रत्यय मात्र हो ।’
पुस्तक नीपजन र नेपाल एउटा छोटो आद्य–इतिहास
लेखक दिवाकर आचार्य
प्रकाशकः मार्टिन चौतारी
नेपाल शब्दको व्युत्पत्ति सम्बन्धमा सन् १८४७ मा क्रिस्टियन लासेन, १८९३ मा लरेन्स वाडेल, १९०५ मा सिल्वाँ लेभी हुँदै कमलप्रकाश मल्ल, ज्ञानमणि नेपालसम्मले गरेका विश्लेषणलाई पुस्तकले सप्रसङ्ग खण्डन गरेको छ । ती विद्वानहरूले सही विश्लेषण नगरेको मात्रै होइन महत्वपूर्ण सामग्री छुटाएको, ठोस प्रमाण दिन नसकेको, भावनात्मक बहकाउमा लागेको आचार्यको धारणा छ । नेपाल शब्दको व्युत्पत्ति भोट बर्मेली भाषिक परिवारबाट सिद्ध गर्न खोजेका कमलप्रकाश मल्लको प्रयत्नलाई पुस्तकमा बौद्धिक व्यायाम र मनोविनोदको संज्ञा दिइएको छ । ठोस प्रमाण दिन नसके पनि धेरैले विविध कारणले मल्लको दृष्टिकोण अंगीकार गरेको भनिएको छ ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा स्पाल्डिङ प्राध्यापक आचार्यले सबैभन्दा बढी शब्द ज्ञानमणि नेपालको ‘नेपाल निरुक्त’ र ‘नेपालको व्युत्पत्ति बराला उपपत्ति’ को खण्डनमा खर्चेका छन् । महत्वपूर्ण र उपयोगी सामग्री संकलन गरे पनि ज्ञानमणिले नेपाल शब्दको निर्वचन प्रक्रिया पूरै खुट्याउन नसकेको लेखकको जिकिर छ । ज्ञानमणिले प्रमाणाभास मात्रै प्रस्तुत गरेको, भ्रमोत्पादक प्रमाण अघि सारेको, पातञ्जल महाभाष्यको प्रसंग सम्बन्धी व्याख्यामा प्रशस्त त्रुटि गरेको लगायत दर्जनभन्दा बढी आरोप लगाइएको छ ।
नेपाल शब्दको व्युत्पत्ति विषयमा कलम चलाएका पूर्ववर्ती लेखक÷अनुसन्धानकर्तामाथि खनिएका लेखक स्वयंले पनि प्रमाणभन्दा बढी अनुमान र अड्कललाई नै जोड दिएका छन् । जस्तो पृष्ठ ७ मा लेखिएको छ, ‘...यसरी वाडेलले आफूले देखे–भोगेका कुरा नेपाल शब्दको अर्थमा खोजे । यी सबै अन्दाजका कुरा थिए ।’ तर के आधारमा वाडेलको भनाइ अन्दाज मात्रै थिए भन्ने कुरा पुस्तकमा खुल्दैन ।
जातिवाचक नीप शब्द र व्याकरण महाभाष्य शीर्षकको अन्तिम वाक्यमा भनिएको छ, ‘नीपहरूलाई पशुपालक गणजाति भन्नु नेवारजति सबैलाई व्यापारी वैश्य वा अहिले चलेको हौवाअनुरुप आदिवासी जनजाति भन्नुजस्तै हो ।’ देशको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत स्वीकारेको आदिवासी जनजाति शब्द लेखकका लागि ‘हौवा’ बनेको छ । उनलाई पत्याउने हो भने संविधानमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउन लागिएको ६ वटा समुदायगत ‘क्लस्टर’ लाई पनि औचित्यहीन मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्को प्रसंगमा लेखक ‘नीपवंशका मूलपुरुष नीप र ऋग्वेदका मन्त्रद्रष्टा ऋषि नीपातिथि अलग–अलग व्यक्ति नभई एकै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ’ (पृ. ४६) भन्छन् । यस्ता थुप्रै प्रसंगबाट भावना नभई प्रमाणका आधारमा मात्र बोल्ने लेखक स्वयंको दाबीमा खोट देखिन्छ । उनी आफैंमा प्रशस्त कुण्ठा रहेको आभास पाइन्छ ।
नेपाल शब्दको व्युत्पत्ति गर्दा विगतमा त्रुटि हुनसक्छन् र त्यसमा लगातारको गहन अनुसन्धान आवश्यक छ । नीपजनबारे उपलब्ध सामग्रीहरूको संयोजन, प्रस्तुति र तिनको विश्लेषण गर्ने लेखकको प्रयास प्रशंसनीय छ । यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न चाहनेका लागि पुस्तक नपढी नहुने बलियो सन्दर्भ सामग्री बनेकोमा पनि कुनै सन्देह छैन ।